The Book – The Nkwusa Nlaghachi nke Eze | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
My hụrụ n’anya onwunwe blog na-agụ.
M ụtọ ịkpọsa n’akwụkwọ nke m akwụkwọ onye aha bụ otu ihe ahụ dị ka blog « The ekwusa Nlaghachi nke Eze »
Ị nwere ike ugbua ịtụ ya ndị nchịkọta akụkọ « Edilivre » tupu ọ bụ na-ere akwụkwọ
Aha nke Akwụkwọ: « The Nkwusa Nlaghachi nke Eze »
mbipụta Edilivre – APARIS
Ụsụ A, 2nd Ft
Internet Kpọtụrụ: http://www.edilivre.com/contacts
Christianity anyị na otu na-eleghara anya, hapụrụ na chụọ àjà ka ọdịmma nke ụmụ mmadụ na onye aha anyị na-ahụ na anyị na-eji nwayọọ nwayọọ « ehichapu » nakwa na chọọchị anyị bibie. Anyị na-achọta otu pụrụ iche ịrị elu nke Islam n’ụwa nile.
Ọ bụrụ na ị na-agụ m blog posts, ị maara na nke a bụ harbinger ike ịrịba ama nke na-eru nso nloghachi nke Onyenwe anyị na Eze Jizọs Kraịst.
Ya mere na dị ka ọtụtụ wee zọpụta ha, anyị ga-niile mee ihe niile anyị nwere ike ime ka ụwa mara na ịghọta na Jizọs Kraịst bụ Eze nke ụwa na ọ bụ azụ n’oge na-adịghị na-ekpe ikpe ndị ikom na ndị mba ọzọ.
Ọ bụ ya mere m kere a blog na-ekele gị ji obi ụtọ ileta na-agụ m na isiokwu.
The blog ugbu a gara banyere 500 ugboro kwa ụbọchị. Nke a nwere ike-atụle a ihe ịga nke ọma.
Ma, nke ahụ bụ ezughị ịgwa ụwa nloghachi nke Eze Jisọs Kraịst na otú ahụ ka m kpebiri ide a akwụkwọ nke mere na kasị ukwuu ọtụtụ bụghị ịnweta internet Na asian na na onye ọ bụla nwere ike ikpebi mkpụrụ obi ya na akọ na uche nke ụzọ ọ chọrọ na-eso.
Anyị na ọchịchịrị otu, okwukwe anyị na-pụtara na ọtụtụ obi na-adị Chineke agbahapụwo, ma m obi sie gị ọ bụghị.
Ọ dịghị mgbe Chineke hapụrụ anyị, ọ hụrụ anyị n’anya iji ekwe nwa ya nke na ọ dị ọcha Ịhụnanya, bịara n’ụwa ma e nwere emegbu, kparịrị, pịa ndien ke akpatre ke jọgburu onwe ahụhụ ga-kpogidere na a kpọgidere n’elu obe ngafe site ọnwụ zọpụta anyị.
Ma Ewoo anyị na-idei mmiri na ozizi ụgha, ndị amụma ụgha na chi ụgha na ichegbu anyị ọhụụ nke Chineke na-enwe anyị na-delusion ụzọ ụkwụ.
N’ihi ya, m chọrọ iji mee m akwụkwọ na-agụ imerime àmà nke ịdị adị nke Chineke na ya na nwa Jizọs Kraịst. Nke a bụ ka niile ndị ọzọ « ndị kwere ma sachants ».
My akwụkwọ na-egosi na ọ bụ Chineke bụ onye kere eluigwe na ala na ihe niile dị n’ime ya. Ọ na-egosi na divinity nke Jizọs Kraịst na-eru nso laghachiri n’ụwa.
Mgbe ọ bụghị a akwụkwọ akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ sayensị, ọ na-akọwa nwoke njem site ya inception ya laghachiri Ogige Ubi nke Iden n’ọbubu-eze nke Jizọs Kraịst na hụperetụ ọdịnihu nke nwoke mgbe ọchịchị nke Jizọs Kraịst.
Ọ na-ezipụta amụma nke ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ na-enye ohere mara karịa nke anyị na-atụ anya nke nloghachi nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
Ọ dị mkpa na ọbụna oké mkpa iji na-ezumike ná ndụ na-ngwaahịa nke ihe dị mkpa na mkpa ná ndụ. Nke a bụ ihe m na-agba gị ka ị na-eme nke a site na-agụ n’akwụkwọ m.
Jizọs Kraịst na-abịa azụ n’oge na-adịghị na-ekpe ikpe ndị ikom na ndị mba, ọ bụ a n’aka ma na mbụ nnọọ ike ụbọchị ka na-ọkụkụ Earth na mmadu. Ịgụ akwụkwọ nwere ike ịkwadebe gị ka ị na-eche ihu ndị a siri ike ugboro na anyị ka nwere ịgafe.
Ngwọta fences-enye gị ohere iji gosi na anyị niile nsogbu na-eto eto mgbe nile maka ọtụtụ afọ. Ma anyị bụ ndị nkọwa na bụ na akwụkwọ.
M na-agba na ị bụghị nanị na-agụ m akwụkwọ kamakwa iji mee ka ọ mara nke mere na ihe nwere ike na-agụ ya na-aghọta na eziokwu adịghị ahụ kwa ụbọchị eziokwu anyị kọwara anyị ekweghị na Chineke ọha mmadụ.
Ka anyị niile na-agha nke Jizọs Kraịst, ọ bụ anyị ọrụ dịịrị ndị Kraịst na-arụ ọrụ na-ekpesi ka ọha na eze okwu ọma « Jizọs Kraịst na-abịa azụ n’oge na-adịghị »
All nwere ike azọpụta ma ọ bụrụ ha na-abịa Christ site na baptism na nchegharị.
Ọ ga-eme ka anyị na-eche ihu eziokwu na-aghọta na anyị na-ebi n’ụwa ruo ọtụtụ afọ oge ka ike dị ka ndị mmadụ n’otu n’otu.
Ndị a bụ kwa ụbọchị rehearsals na ọdachi ndị dị otú ahụ dị ka outsized oké mmiri ozuzo, idei mmiri, oké ifufe, ọdachi, ala ọma jijiji, ajọ ifufe, ajọ ifufe, ọkụ ọgbụgba, mgbawa ugwu eruptions.
Ma, ọ bụkwa kwa afọ maka ọtụtụ afọ n’enweghị mara ọnwụ kwa nde n’ihi azụ, nnụnụ, na anụ ụlọ na anụ ọhịa niile n’elu uwa.
Ha na-agha na deafening noises nke a agha ụwa, ime ihe ike, ọnwụ nke ụkpụrụ na omume ọma.
Na ọ bụkwa ndị agbasa n’ọtụtụ radicalism na islam extremism onye fanatics massacred òtù nke Kraịst ndị na-akwa mmerụ, imebisị ihe, oku ogbugba na mbibi nke ụka.
Ọ bụghị banyere ịrịba ọnụ na Chọọchị Katọlik nke ndị nchụàjà.
Ndị a niile evils anyị ga ịgbakwunye global mbibi na biri n’elu ụwa ebe ọ bụ na ngwaahịa ahịa okuku nke September 29, 2008, na-eme agụụ na nhụsianya n’ebe nile, mmetụta bụ ihe ọzọ dị mkpa dị ka ụwa bi mụbara site na abụọ na ọkara ijeri bi na 1950 karịa asaa ijeri na 2012, afọ 63 naanị.
Ọbụna Vatican bụ onye Nsọ Lee nke Catholic Church aghọwo a aṅụrụma ruru ebe Jizọs Kraịst aghọwo a dị mfe ngwa ma ọ bụ a ibe nke Vatican Museum.
Niile a na-kọwara n’akwụkwọ.
Ndị nile maara m na m mgbe mbà n’ihi na ọ dịghị ugwu bụ na-agaghị emerili na m ga-anọgide na-eme ihe iji gwa dị ka ọtụtụ ozi ọma nke na-eru nso Nlaghachi nke Eze Jizọs Kraịst.
N’ihi na ndị na-achọ inwere mara onye m:
Ebe a nkenke a obere akụkụ nke m biography.
Nwa a Portuguese ọkụ eletrik kwaga ka France na 1957, m na-etolite na Catholic agụmakwụkwọ, Catechism, udo na JOC (-eto eto Christian Ọrụ).
Ozizi a mere ka m nwoke bụ onye Kraịst ọkọlọtọ.
M na-agbalị nakwa dị ka m bụ ike na-edu a ike ndụ na Chineke ịhụnanya na nkwanye ùgwù ya iwu (na-enweghị ịbụ a senti!)
M ga-asị na ebe ọ bụ na m bụ nwata Chineke anọgidewo na-akụkụ nke ndụ m. Ọ bụ a obi, a enyi, onye ndụmọdụ na ihe dị oké enyemaka ná ndụ kwa ụbọchị.
N’oge a dị nnọọ ogologo akụkụ nke m na ndụ m nwere nnọọ ike na mgbagwoju anya ọrụ na Chineke mere ọtụtụ ọrụ ebube na-m ndụ na nke a dị ize ndụ ọrụ.
Ya mere enweghị m nzuzo site na Chineke na m nwere ngụkọta na obi ike zuru ezu na ya.
Chineke na-egosi ịhụnanya Ya m mgbe niile na-enye m enyemaka ya ná ndụ kwa ụbọchị. M na obi sie gị na ọ bụ dị ọcha ọṅụ iche na hụrụ n’anya ma nyere site na Chineke.
N’ihi ya, m chọrọ ịbụ e nwekwara Chineke a dị umeala n’obi nta àmà anyị ịhụnanya ya na-eru nso laghachi ụwa nke ya na nwa Jizọs Kraịst.
Ke 2009 site merest ohere m ghọtara na anyị na-ebi mbubreyo Akwụkwọ Nsọ ugboro na ga-ejedebe na nloghachi nke Jizọs Kraịst.
N’ezie a ọma Christian m mụtara nke ọma Catechism ụbọchị ga-abịa na njedebe nke ụwa nakwa na ụbọchị, Chineke ga-alaghachi Earth na-ekpe ikpe mmadụ niile.
Tupu ọgụgụisi anabata nloghachi nke Jizọs Kraịst e zubere ọma maka anyị na ọgbọ, m ukwuu nyochaa ma niile amụma ịrịba ama ezikwa ọgwụgwụ ugboro na nloghachi nke Jizọs Kraịst na Ụwa.
M mechara gaa àmà na-egosi na-achọpụta na ihe ịrịba ama niile na amụma nke ọgwụgwụ mgbe ụfọdụ ewebata nloghachi nke Jizọs Kraịst nọ na-emezu ụbọchị ọ bụla nakwa na nke a nwere ike n’ụzọ ọ bụla na-a ukem ini dị ka ọtụtụ n’ime amụma ndị e mezuru dị mkpa.
Nke a emewo radically gbanwere ndụ m na otú m kpebiri na m na ike a na blog « The ekwusa Nlaghachi nke Eze » nke m bipụtara ọtụtụ isiokwu na n’asụsụ nile na-agwa mmadụ niile a magburu onwe omume ma na-eme na- edemede nke Christian ụwa nke mere na onye ọ bụla nwere ike ịkwadebe ya uche na mkpụrụ obi ya na nloghachi nke Jizọs Kraịst Onyenwe anyị na Eze, nanị nwa nwoke nke Chineke.
My akwụkwọ aims egosi onye na-agụ na ịdị adị nke Chineke, divinity nke Jizọs Kraịst, na-akọwa na mmalite nke mmadụ na Chineke na-agwa ndị ọnụ ọgụgụ kasị ukwuu nke a magburu onwe nloghachi nke ebube anyị Onyenwe anyị Jizọs Kraịst n’ihi na ya puku afọ eze.
E a na n’aka na a apocalyptic ụwa bụ na Jizọs Kraịst na-alaghachi anya.
Ọ dị mkpa na mkpa icheta na Jizọs Kraịst kwuru, sị: « Abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ, ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma site m. «
Ọ bụrụ na a na-adịghị mere, ka ị na-eme baptizim na ọtụtụ mmadụ na-Kraịst ga-azọpụta.
N’oge na-adịghị ọ ga-abụ akaha na a ga-nile Earth ákwá na anya mmiri niile latecomers.
M na-arịọ gị ihe na-amasị ịme m akwụkwọ niile gị na nne na nna, ndị enyi, mmekọrịta, na kọntaktị na niile elekọta mmadụ na netwọk niile na-na-mara ma na-eso na-atụgharị ịhụnanya nke Chineke na -azọpụta.
Chineke hụrụ anyị n’anya ma hụ ya n’anya ya na nwa Jizọs Kraịst bụ n’oge na-adịghị laghachi Earth maka nloghachi ka Ogige Ubi nke Iden ndị niile na-abịakwute ya.
Mụrụ Heart ekele gị n’ihi na ihe niile ị na-eme maka ịhụnanya na otuto nke Chineke na Jizọs Kraịst!
Chineke na-agọzi gị na-enye gị ohere na-arụ ọrụ maka ịhụnanya na otuto nke Jizọs Kraịst.